Ny Crossing dia mandefa tanjona mavitrika ao amin'ny Terminal Transbay vonjimaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny Crossing dia mandefa tanjona mavitrika ao amin'ny Terminal Transbay vonjimaika
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fikarakarana sakafo sy zava-pisotro ivelany, fialamboly ary fanolorana fialamboly dia hamelona ny tanànan'ny San Francisco ary hanome fanatsarana ilaina amin'ny faritra akaikin'ny East Cut miaraka amin'ny fisokafan'ny The Crossing at East Cut.
Ny Crossing dia fampidirana vonjimaika natao ho valin'ny sy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny drafitra fanarenana ny tanàna any an-toerana ny Ben'ny Tanàna London Breed.
Ny ezaka mandritra ny taona maro hampiasana ny tranokala dia hitondra tombontsoa ilaina ho an'ny manodidina raha sady mandray anjara amin'ny fanokafana ny afovoan-tanànan'i San Francisco.
Ny sakana efa ho 3.5 hektara dia ovaina ho oasis an-drenivohitra.
Mpiara-miombon'antoka amin'ny fanapahana atsinanana (ECLP), fiaraha-miasa eo amin'ny Ny distrikan'ny tombotsoan'ny fiarahamonina atsinanana (East Cut CBD), Nestory Park, Tena miasa ary Street Soccer USA, dia nanambara ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Ny fiampitana any Atsinanana, toerana ivoahan'ny fiarahamonina ao amin'ny Terminal Transit Transbay Sementara. Ny ezaka mandritra ny taona maro hampiasana ny tranokala dia hitondra tombontsoa ilaina ho an'ny manodidina ary koa manampy amin'ny fanokafana ny afovoan-tanànan'i San Francisco sy ny fanohanana ireo orinasa madinidinika izay niatrika fanamby mbola tsy nisy toa azy nandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Ny fisokafan'ny 10 septambra 2021, ny The Crossing dia fampidirana vonjimaika ho valin'ny sy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny drafitra fanarenana ny tanàna any an-toerana ny Ben'ny Tanàna London Breed. Ny sakana efa ho 3.5 hektara eo anelanelan'ny Howard, Main, Folsom, ary ny Beale Street dia novaina ho oasis an-tanàn-dehibe izay ahitana zaridaina labiera ankafizin'ny mpianakavy, kamiao mpitondra sakafo, kianja filalaovam-baolina ary mural an-tany amin'ny dingana voalohany. Hanampy tsy ho ela ny sinema an-kalamanjana, kiosko sakafo sy fivarotana, tsenan'ny fiarahamonina ary toerana filalaovana.
"Ity taona ity dia naneho amintsika ny maha-zava-dehibe ny fidirana amin'ny habakabaka ivelany ho an'ny fiadanan'ireo vondrom-piarahamonintsika sy ny fampandrosoana ankapobeny ny tanànantsika," hoy ny Ben'ny tanàna Breed. "Ity tranonkala natao tsara tarehy ity dia hanome toerana azo antoka sy mahaliana ho an'ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina sy ireo mpitsidika ny tanànantsika mba hivoaka sy hankafy ny hazavan'ny foibenay."
“Nandritra ny taona maro no nanosika ny mponina hampihetsika ny tranokala, noho izany dia nahatsapa izahay fa voatery manokatra faran'izay haingana ary manampy fandaharana mandritra ny volana maromaro,” hoy i Kipp Kjeldgaard an'ny Real Active. "Noho ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny orinasa, ny fanokafana haingana dia zava-dehibe ihany koa mba hanampiana ireo mpandraharaha eo an-toerana ary hanome tanana tanana amin'ny famerenana ireo mpiasa sy mpitsidika hiverina any amin'ny Tanànan'i San Francisco. "
“Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa eo an-toerana sy ireo fikambanana eo an-toerana hanome fandaharana samihafa sy mahasarika, ity tetikasa vaovao manaitaitra ity dia hampandroso ny fanarenana an'i San Francisco tanàna ary tena ho toerana iray hahatsapan'ny rehetra ny fandraisana azy ireo. Manasa ny rehetra hiaraka aminay amin'ny fankalazana izay rehetra mahatonga an'i San Francisco ho tanàn-dehibe manerantany; sakafo, mozika, hetsika ary toerana hahafahan'ny rehetra mivory ao anaty toerana tena miavaka. ”
Fandaharam-potoana tarihin'ny tamberina avy amin'ny fiarahamonina
Ny East Cut CBD, fikambanana tsy miankina iray izay manome fanadiovana, fiarovana ary fikojakojana ireo valan-javaboary sy toerana malalaka eo amin'ny distrika, dia niasa tamin'ny fampandehanana ilay tranokala nandritra ny telo taona mahery. Tafiditra ao anatin'io dingana io ny fanadihadiana momba ireo mpifanila vodirindrina maherin'ny 1,200 izay natao niaraka tamin'ny biraon'ny Mpanara-maso ny Distrika 6, Matt Haney, nanontany ireo mpamaly momba ny safidiny amin'ny fandaharana eny an-toerana.
"Ny valiny dia nanam-pahefana tamin'ny fitarihana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ny tranonkala ary ho tsapan'ny mpitsidika ny fandaharana izany valiny izany," hoy i Andrew Robinson, The East Cut CBD Executive Director.
"Toerana iray mitombo sy miroborobo ity, saingy mila toerana malalaka bebe kokoa mba hipetrahan'ny vondron'olona, ​​hilalao ary hankafiziny," hoy i Supervisor Haney. "Ny Crossing dia natao hamaly izany filàna izany amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mponina. Miaraka amin'ny lafin-javatra sy endrika mahafinaritra be dia be ity, azo antoka fa hampiorina bebe kokoa ny iray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina haingana indrindra eto an-tanàna ity. ”
Ao afovoan'ity tranonkala ity dia hisy zaridaina misy labiera ho an'ny fianakaviana sy trano fisotroana tantanan'ny Monarch Beverage Catering, izay nitety toerana biriky sy mortara ary hetsika pop-up pop-up nandritra ny 10 taona tao an-tanàna. Manolotra traikefa amin'ny tontolo iainana isan-karazany, ao anatin'izany ny faritra misy ny fianakaviana, efitrano fandraisam-bahiny, ary toerana azo itokisana ho an'ny vondrona sy fikambanana, ny zaridaina labiera dia hisy latabatra fitsangatsanganana, seza fandraisam-bahiny any ivelany, ary rindrina an-tany noforonin'ny mpanakanto avy any an-toerana Laura Stevenson.
Raha ny zaridainan'ny labiera dia hodidinin'ny kioska amin'ny sakafo sy antsinjarany namboarin'ilay mpandraharaha ao an-toerana sy tompon'ny Lightbox Café, Hugo Santana, andiana kamiao faran'izay tsara kalitao no hisolo azy ireo mandra-pahatapitry ny famoronana sy fametrahana azy ireo.
Miorina eo an-toerana, Street Soccer USA dia mpiara-miasa efa ela tao amin'ny tanànan'i San Francisco sy ny fikambanana nasionaly mitarika amin'ny fampiasana ny baolina kitra ho an'ny fanovana ara-tsosialy, miaraka amin'ny traikefa efa am-polony taona mahery miasa any San Francisco sy manerana ny Bay Area, California, ary ny firenena. Street Soccer USA dia hametraka fanjakana roa amin'ny kianjan'ny baolina kitra haiady hampiantrano lalao ligy fifaninanana ho an'ny rehetra ankoatry ny fampiantranoana hetsika sy fanentanana miorina amin'ny fanatanjahantena. Street Soccer USA koa dia hampiofana sy hanakarama mpikambana ao amin'ny fiarahamonina hampiofana sy hitantana fandaharana ho an'ny Street Soccer Community Club izay ahafahan'ny tanora manodidina miditra amin'ny fandaharam-pianarana fahaiza-miaina amin'ny alàlan'ny soccer maimaimpoana.
“Amin'ny fidirana amin'ny hery mampitambatra amin'ny lalao, izay mampivondrona ireo mpilalao na inona na inona firazanany, fivavahana na toe-karena ara-toekarena, ireo zaridainan'ny Street Soccer USA dia lasa toerana reharehan'ny fiarahamonina. Ny fisondrotanay dia namboarina tamin'io toe-tsaina io ihany, ary faly izahay manasa ny olon-drehetra hilalao eto ary handray anjara amin'ny herin'ny baolina kitra hampiray », hoy ny talen'ny mpitantana ny Street Soccer USA, Rob Cann.
Ny ekipa Crossing dia manantena ihany koa fa ny sinema an-kalamanjana dia ho vonona handray ireo mpankafy sarimihetsika amin'ny fandaharana vita amin'ny fandaharam-potoana fohy aorian'ny fisokafan'ny tranonkala. Mpanentana hetsika sy mozika Noise Pop Industries, izay miasa amin'ny Bay Area's DoTheBay.com ary nanampy tamin'ny fiainana ny Fort Mason Flix sy ny Sundown Cinema Film Nights, nirotsaka hampivelatra sy hampandeha ny sinema ivelany.
Ankoatry ny faritra fanatanjahan-tena ho an'ny fiaraha-monina misokatra ho an'ny tsirairay sy ny mpanazatra, ny kilasy vondrona sy isam-batan'olona dia hatolotry ny LuxeFit, izay miasa ao amin'ny Proxy any Hayes Valley.
Ny Zone Community Community Crossing dia hanasongadinana fampitaovana be dia be amin'ny besinimaro, ao anatin'izany ny velaran-tany manodidina ny 5,000 metatra toradroa izay azon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana atao maimaim-poana. Ny fitantanana dia mamorona tsenan'ny fiarahamonina ihany koa, izay ankoatry ny fivarotana zava-baovao, ny entana eo an-toerana izay mety ho hitanao eo amin'ny tsenan'ny tantsaha, dia hanasongadinana ihany koa ireo entana fonosana sy fanolorana antsinjarany.
Noho ny fampidirana avy amin'ny Biraon'ny Community Investment and Infrastructure (OCII) ao San Francisco dia miara-miasa amin'ny The Crossing En2Action ary La Cocina, fikambanana tsy mitady tombontsoa miasa hamaha ny olan'ny fitoviana amin'ny asa aman-draharaha, ho an'ny fotoana hanasongadinana ireo vokatra avy amin'ny mpandraharaha ao anaty tontolo iainana afovoan'ny mpandeha an-tongotra izay nohamafisin'ny hetsika sy hetsika mahazatra.
David Flaherty avy amin'ny Nestory Park dia nanambara hoe: Raha jerena ny distrika dia nanampy trano fonenana an'arivony manerana ny sehatra ara-toekarena, amin'ny faritany mitsivalana indrindra, ity tetikasa ity dia mamaly ny filana lehibe amin'ny alàlan'ny fanomezana tombontsoa lehibe ho an'ny fiaraha-monina izay tsy nananan'izy ireo. Amin'ny fampiharana feno dia antenaina fa mpandraharaha sy mpandraharaha eo an-toerana maherin'ny 30 no mampiasa olona 60 no hiasa eo an-toerana. ”
Volavola noforonin'olombelona noforonin'ny orinasa manan-talenta ao ambadiky ny Oracle Park
Ho an'ny famolavolana dia niara-niasa tamin'ny ekipa The Crossing be mponina, orinasan-trano sy famolavolana manerantany izay manampahaizana manokana amin'ny fampifanarahana ny olona amin'ny alàlan'ny traikefa miavaka sy namboarina. Ireo mpamorona fahitana ao ambadiky ny Oracle Park any San Francisco sy ireo kianja, kianja ary ivon-toeran'ny fivoriambe manerantany, Populous dia mamolavola hetsika vetivety ihany koa ho an'ny Superbowl NFL, ny Lalao Olaimpika ary ny FIFA.
"Tianay ny manampy amin'ny famongorana ity faritra misongadina ao San Francisco ity amin'ny fanahy miavaka, manasa ny olona avy amin'ny tontolo iainana sy orinasa manodidina azy ireo hamorona ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka sy ny serivisim-piangonana hitan'izy ireo eto," hoy ny talen'ny Sekretera Senior ao Populous, Michael Lockwood .
Ny asa 'Populer' amin'ilay tetikasa dia hisy fiantraikany mihoatra an'i San Francisco, lasa modely ho an'ny fanentanana vonjimaika ny vondrom-piarahamonina rehefa amboarina sy hatsangana ary mampiseho ny fomba hamoronana fatorana misy dikany amin'ireo faritra manodidina ny firenena.
"Ny Crossing dia miova amin'ny famoronana lanja ho an'ny sombin-tany iray izay efa fomban-drazana efa voafefy nandritra ny vanim-potoana fahazoan-dàlana," hoy ny Principal Populer, Riki Nishimura. “Raha tokony avela hiasa ambany ny toerana, dia averinay amin'ny mpiara-monina ilay tranonkala, ary mamorona toerana hahafahan'ny olona mifaly miaraka. Na dia teo aza ny tantara dia vavahady ahafahan'ny olona tonga sy mivoaka ny tanàna, lasa toerana ahafahan'ny olona mamorona ny diany manokana mandritra an'io andro io ary miaina fotoana tsy hay hadinoina miaraka amin'ny fianakaviany. ”
Raha mandefa haingana ny tranokala ECLP ka afaka mankafy fandaharana avy hatrany ny mpitsidika, dia miara-miasa amin'ny Populous hanatsara ny fandaharana sy ny endrika famolavolana amin'ny dingana II izay tena hahatonga ny The Crossing ho toerana vaovao sy sarangan'izao tontolo izao. Tetezana ambony miampita ampahan'ny tranokala ary mamorona amiteiteaux tokana no jerena, toy ny sehatra iray izay hiasa ho toy ny lapan'ny tanàna maoderina misy fampisehoana, hetsika ara-kolontsaina ary fivorian'ny olom-pirenena. Notazomin'ny ECLP ny masoivohon'ny varotra Bay Area PIVOT mba hanatanterahana paikady mpanohana sy mpiara-miombon'antoka hanampy amin'ny fampivoarana ireo sy ireo singa nohatsaraina hafa.
Satria io fampahavitrihana io dia ezaka iarahana amin'ny fikambanana sy olona marobe, koa fandraisana anjaran'ireo mpanakanto, orinasa ary mpiara-miombon'antoka hanatanteraka sy hanatsara ny tranokala no raisina.
Ireo fikambanana sy olona liana amin'ny fotoana mety hiaraha-miasa dia afaka mitsidika www.draintisanay.com na mailaka [email voaaro] Raha mila fanazavana fanampiny.
Momba ny mpiara-miasa amin'ny East Cut Landing
East Cut Landing Partners (ECLP) dia Public Benefit LLC natsangana ho an'ny tanjona manokana amin'ny fampandrosoana sy fiasa Ny fiampitana any Atsinanana, toerana itodian'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny Terminal Transbay Sementara taloha any San Francisco. Niorina tamin'ny fikambanana Bay Area efatra miavaka, manana foibe telo any San Francisco, ny ECLP dia miaina ny traikefa sy fahaizana miavaka an'ny mpiara-miasa tsirairay hahatratrarana tanjona iraisana: ny fanomezana tombontsoa ho an'ny fiaraha-monina malalaka mba hifalian'ny rehetra.
tsy-tombony CBD tapaka atsinanana ary Street Soccer USA manome ny fahafaha-miasa manokana momba ny tranokala sy ny programa Tena miasa ary Nestory Park manolotra fampandrosoana, fampahavitrihana ary traikefa amin'ny asa.